IWalland Forests Treehouse Suite eneTub eshushu(entsha)
Indlu ekhiwe emthini sinombuki zindwendwe onguLee
Yonwabela ukusetwa okuthandekayo kwale ndawo yothando kwindalo phakathi kwemithi. Le ndawo yenzelwe izibini ezitshatileyo, le ndawo yokuphumla iqaqambisa ibhafu eshushu yabucala, ibhedi yokumkanikazi uMurphy, i-intanethi, i-tv, isandi sebluetooth kunye nekhitshi enefenitshala epheleleyo. I-futon elingana newele iyafumaneka xa iceliwe umntwana. I-Treehouse inokuqeshwa kunye nekhabhathi (jonga uluhlu olwahlukileyo) ngesaphulelo se-10%. Ifumaneka nge-1 kaSeptemba 2021
Izinto eziluncedo zasekhitshini ziquka i-Ninja Air fryer, i-hotplate enye, umenzi wewaffle waseBelgian kabini, umenzi womkhenkce ophathwayo, i-dishwasher ephathekayo, i-oveni yemicrowave, isikhenkcezisi esinefriji, kunye nomenzi wekofu. Igrill yangaphandle yepropane ibekwe kwidekhi kunye netafile yokuhlala 4. I-Hammock nayo ibekwe kwidekhi. Izitepsi zihla zisuka kwibhafu yabucala zisiya kumgangatho osezantsi okhokelela kwibhulorho enqumla umlambo ukuya kwindawo yomlilo. Indawo yomlilo ingasetyenziswa kunye neendwendwe zekhabhinethi. Iwasha kunye nesomisi ziyafumaneka xa uceliwe.
Ifakwe kwimizuzu nje embalwa ukusuka eTownsend kunye neGreat Smoky Mountains National Park, iPigeon Forge kunye neDollywood zimalunga nemizuzu engama-30 ukuya kwengama-40 kuphela. Amaziko eRafting kunye ne-tubing yimizuzu eyi-15-20 ukusuka kwi-treehouse.
Sinomphathi wendawo ohlala nenkosikazi yakhe malunga neeyadi eziyi-100 ukuya phezulu endulini kwaye uya kufumaneka ukunceda naziphi na iingxaki ezingalindelekanga. UEmily ngumamkeli wam kwaye uya kuhlala eyindawo yokunxibelelana nawo nawuphi na umyalezo. Kananjalo siya kufumaneka ukuphendula nayiphi na imibuzo.
Sinomphathi wendawo ohlala nenkosikazi yakhe malunga neeyadi eziyi-100 ukuya phezulu endulini kwaye uya kufumaneka ukunceda naziphi na iingxaki ezingalindelekanga. UEmily ngumamkel…